सेतु विक चोकको नामले प्रसिद्ध न्यूरोडको चोकमा भएको सेतु विकको शालिक टाउको बिनाको छ, पूर्व राजा वीरेन्द्रको शालिक भएको चोकमा पनि केही छैन । पूर्व राजा त्रिभुवन चोकमा पनि तोडिएको छ । नगरपालिकाको काम शहरको सुन्दरता बढाउनु पनि हो । ती खाली चोकहरुमा प्रतिमा र शालिक राख्न नसके पनि नेपालको राष्ट्रिय झण्डासम्म राखेर वरिपरि फुलका गमला राख्ने बजेट विनियोजन गर्न सकिंदैन ?
फेरि अर्को कुरा सुरक्षाकर्मीहरुका पोष्ट सबै चोकमा राखिएको देखिन्छ, तर चोकका वरिपरि घुम्ति पसलहरुले गरेको फोहोर व्यवस्थापन गरिएको छैन । ठाउठाउमा फोहोरको थुप्रोहरु छन्, शौचालयहरुमा सरसफाई छैन । ढल निकास खन्ने र पुर्ने काम बाहेक अरु केही भएको छैन । नगर बस सेवा नाम मात्रका छन्, भन्सारबाट कोहलपुर जाने मात्र यात्रुका लागि सुविधा छ ।
नेपालगन्ज नगरपालिका १७ वटा वडा सम्म जाने गाडीको व्यवस्था हुनुपर्छ । रेक्सा चालकहरु पनि भारतीयहरुले भरिएका छन् । विदेशी रेक्सा चालकलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । यसले गर्दा लागु औषधको कारोबार बढ्नुको साथै चोरी डकैती र अपहरणको अपराध बढिरहेको छ । नगरपालिकाले सबै टोलका सडकहरुका चोकहरुमा सुन्दरता देखिने खालका व्यक्तित्वहरुका प्रतिमा निर्माण गराई राख्न लगाए नेपालगन्ज शहरको सुन्दरता बढ्ने छ ।
नेपालगन्जको वडा नं. १ धम्बोझीमा रहेको वाटर पार्क नाम मात्रको छ । वाटरपार्कको संरक्षणका लागि छुट्याइएको २० लाख रुपैयाँको बजेट कुनै कामै नगरेर पार्टीगत रुपमा उपभोक्ता समितिको निर्णयमा शिव मन्दिरलाई सो रकम हस्तान्तरण गरिएको खबरले वाटरपार्कको विकास हुने कुरामा स्थानीय बासिन्दाहरुमा शंका पैदा भएको छ । हरेक साल २–३ जना व्यक्तिको ज्यान जाने वाटरपार्कलाई कि त माटोले पुरेर बजार बसाल्नु प¥यो कि त वरिपरि बलियो तारबार हाल्नु प¥यो । अन्यथा हरेक वर्ष वाटरपार्कको नाममा बजेट छुट्याएर जथाभावी खर्च गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।
वाटरपार्कको चारैतिर बजार विस्तार गर्ने भनेर जग्गा अधिग्रहण गरिएपनि योजनाको काम शुरु गरिएको छैन । बरु ठाउँ ठाउँमा माटो झिकेर स्थानीय व्यक्तिले लिने गर्दा ठूला ठूला तलाई बन्नुका साथै स्थानीय बासिन्दाका लागि सार्वजनिक चर्पीको रुपान्तरण गरेर दुर्गन्धले वातावरण नै धमिलिएको छ भने लागु औक्षध खाने गुण्डाहरुको क्रिडास्थलको रुपमा सो ठाउँ विकास भएको छ । वाटरपार्कको क्षेत्रतिरको लागि सुरक्षा पोष्टको पनि जरुरी देखिएको छ । सो ठाउँमा दिउँसै चोरी बलात्कारी घटनाहरु घटिरहेका छन् । यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । ०००